रहेनन् डा. बाबुराम, लडेर बेहोस भएका उनी अस्पताल पुर्याएलगत्तै मृत घोषणा | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more रहेनन् डा. बाबुराम, लडेर बेहोस भएका उनी अस्पताल पुर्याएलगत्तै मृत घोषणा
रहेनन् डा. बाबुराम, लडेर बेहोस भएका उनी अस्पताल पुर्याएलगत्तै मृत घोषणा
पुस २४ गते, २०७४ - ०७:०५
काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालहरुको छाता संगठन(व्यव्सन) का पूर्व अध्यक्ष डा. बाबुराम पोखरेलको निधन भएको छ। बिहान साढे ६ बजे आफ्नै निवास बानेश्‍वरको बाथरुममा लडेका ६३ वर्षीय पोखरेललाई नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइए लगत्तै डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए । उनलाई फोक्सोको सामान्य समस्या हुनुका साथै मुटुमा पेसमेकरसमेत जडान गरिएको थियो। पोखरेल लामो समयदेखि घरमै आराम गरेर बसेपनि सामान्य अवस्थामा रहेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ।
आजको अन्नपूर्णमा खबर छ-उनका दुई छोरा र श्रीमती छिन्। जेठा छोरा अमेरिकामा बस्छन्। उनी मंगलबार आउने र त्यसपछि मात्र दाहसंस्कार गरिने पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ।
पोखरेल हिसानका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा भिएस निकेतनका सञ्चालकसमेतसमेत हुन्। उनी तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका पूर्व सांसदसमेत हुन् ।
पुस २४ गते, २०७४ - ०७:०५ मा प्रकाशित